Tirada soomaalida magangalyada ka codsata Sweden oo hoos u dhacday. | Somaliska
Tirada Soomaalida magangalyada ka codsata Sweden ayaa hoos u dhac ku yimid ayadoo arintaas loo eedeynayo caqabada Soomaalida laga saaray keenista kharaabada. Hay'ada Socdaalka Sweden ayaa markii hore qorsheysay in ilaa 31,000 qof guud ahaan ay iska dhiibi doonta dalka Sweden sanadka 2010 balse tiradaas ayaa hada la filayaa in ay dhacdo 29,000. halka sanadka soo socdo uu Migrationaka filaayay in ilaa 28.000 oo qof ay iska dhiibi doonta Sweden ayadoo hada ay qayaastu tahay 27.000. Hoos u dhaca ku yimid Soomaalida iska dhiibta Sweden ayay keentay markii Soomaalida lagu xiray in ay baasaboor soo bandhigaan marka ay codsiga ka sameynayaa wadamada Afrika. Ayadoo intaas ay raacdo sharciyo kale oo uu gaaray baarlamaanka Sweden oo la xiriira keenista kharaabada. Sida la ogyahay Soomaalida lagu keeno kharaabada ayaa inta badan kala taga oo iskood isku dhiiba. Ayadoo ay muuqato in Hay;ada Socdaalka ay ka go'antahay in ay hoos u dhigto tirada Soomaalida ee iska dhiibaya Sweden. MigrationsVerket.
Tirada Soomaalida magangalyada ka codsata Sweden ayaa hoos u dhac ku yimid ayadoo arintaas loo eedeynayo caqabada Soomaalida laga saaray keenista kharaabada.
Hay’ada Socdaalka Sweden ayaa markii hore qorsheysay in ilaa 31,000 qof guud ahaan ay iska dhiibi doonta dalka Sweden sanadka 2010 balse tiradaas ayaa hada la filayaa in ay dhacdo 29,000. halka sanadka soo socdo uu Migrationaka filaayay in ilaa 28.000 oo qof ay iska dhiibi doonta Sweden ayadoo hada ay qayaastu tahay 27.000.
Hoos u dhaca ku yimid Soomaalida iska dhiibta Sweden ayay keentay markii Soomaalida lagu xiray in ay baasaboor soo bandhigaan marka ay codsiga ka sameynayaa wadamada Afrika. Ayadoo intaas ay raacdo sharciyo kale oo uu gaaray baarlamaanka Sweden oo la xiriira keenista kharaabada.
Sida la ogyahay Soomaalida lagu keeno kharaabada ayaa inta badan kala taga oo iskood isku dhiiba. Ayadoo ay muuqato in Hay;ada Socdaalka ay ka go’antahay in ay hoos u dhigto tirada Soomaalida ee iska dhiibaya Sweden.
wlaahi horta waa fiican tahay raadiyaha lkin mid no sameeyo oo ah dadka leh faraha is loo dar yeelo gobalo badan oo kamid swedan ayaa jirto xaalad caafimaad daro marka hadii aad aado taqtarkii waxuu ku dhahaa ba sida caada u ah ba biya ha badso ama cabitan ka badan cab marka bal taas ha ka hadasho swedan waana mahadsan tahii